पहिलो त्रैमासमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको नाफा २८.५८% वृद्धि, प्रतिशेयर आम्दानी रू.२७.२१ (वित्तीय विवरण सहित)
कात्तिक २८, काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवमा २८ दशमलव ५८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. २२ करोड ८७ लाख ६४ हजार खुद नाफा आर्जन गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. २९ करोड ४१ लाख ५९ हजार पुगेको छ ।
चुक्तापूँजी रू. ४ अर्ब ३२ करोड ३२ करोड ४९ लाख रहेको कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. १ अर्ब ५ करोड १९ लाख, रिटेन्ड अर्निङमा रू. ६४ करोड ९८ लाख ४१ हजार र शेयर प्रिमियममा रू. ६ करोड ४० लाखभन्दा बढी सञ्चित गरेको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ६३ अर्ब ६४ करोड ७६ लाखभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेर रू. ५१ अर्ब ९९ करोड ४६ लाख कर्जा लगानी गरेको हो । सो अवधिमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. १५ करोड २१ लाख ९१ हजार रहेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी भने गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा घटेको छ ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २९ दशमलव ८६ रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. २७ दशमलव २१ मा सीमित भएको हो । मूल्य आम्दानी अनुपात १३ दशमलव ०१, तरलता अनुपात २४ दशमलव ७५ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १४० दशमलव ८३ रहेको छ ।